April | 2021 | HimiloNetwork
Himilo April 24, 2021	Leave a comment 147 Views
MUQDISHO (HN) — Nadaafadda iyo bilic-ilaalinta wuxuu Islaamku siiyay mudnaan sarreysa. Si ay u ilaaliyaan heerka fayadhowrka iyo degaan bilicsanaanta, Muslimiinta Blackburn ayaa iskaga yimid inay ol’ole nadaafadeed ka sameeyaan hareeraha masjidkooda – iyaga oo soo ururiyay 250 baag oo qashin ah – nadiifiyayna in ku dhow 100 laami iyaga oo waliba sooman. Baaqoodii ah in la iskugu yimaado ol’olahan ...
Himilo April 24, 2021	Leave a comment 162 Views
MUQDISHO (HN) — Ka Moona Khan ahaan oo ku nool Edmonton dhawaqa aadanka uga yimid codbaahiyaha masjidka waxay ku reebtay farxad aan dhammaaneyn. “Waxaan ku dareemay lahaansho iyo inan qeyb kamid ah bulshada ahay – in dhaqankaada iyo caqiidadaada ugu dambeyntii la aqbalay,” Khan ayaa u sheegtay The Canadian. Aadanka ayaa sababo cabasho awgeed looga mamnuucay Edmonton, si kastaba, sannadkii ...
Himilo April 21, 2021	Leave a comment 570 Views
MUQDISHO (HN) — Macalin iyo labadiisa dameer oo ay ugu raran yihiin tiro buugaag ah ayaa ku jira howlgal uu ku quudiyo maskaxda carruurta bulshooyinka yaryar ee ku nool Colombia. Luis Soriano wuxuu rajeynaya in ficilkiisani uu qeyb weyn ka qaadan doono nabad lagu soo dabaalo dalkiisa. Taniyo sannadkii 1930-kii, rabshaduhu waxay ahaayeen astaan lala xiriiriyo nolosha Colombian-ka. Sannadkii 1948-kii ...
Himilo April 19, 2021	Leave a comment 308 Views
Himilo April 13, 2021	Leave a comment 140 Views
MUQDISHO (HN) — Shabakadda HIMILO oo ah warbaahin madax-bannaan oo aan faa’iido doon ahayn taas oo lixdii sannadood ee lasoo dhaafay adeegyo warbaahineed u sameysa bulshada Somaaliyeed, waxay umadda Muslimka ah ugu bishaaraynaysaa bilashada Bisha Soonqaad. Waxaana ay Ilaahay uga rajaynaysaa inuu acmaashooda aqbalo; farxad iyo caafimaadna ku dhameystaan maalmaha cibaadada iyo Alla-bariga. Qoyska iyo dhammaanba bahda shaqada ee Shabakadda ...
Himilo April 13, 2021	Leave a comment 227 Views
MUQDISHO (HN) — Malaayiin Muslimiin ah oo dunida ayaa u dabaal-degaya bilashada Bisha Barakaysan ee Ramadaan – oo in kasta oo aan lagu arkin muqaallada dhaweysada loo aqoonsaday maanta oo Talaado ah maalinta koowaad ee bisha. “Bisha Barakaysan ee Ramadaan laguma arag muuq-dhaweeyaha Sucuudiga ee Hawtah Al-Ekhbariya,” ayaa lagu soo qoray tweeter-ka. Guddiga Dar Al-Ifta ee dalka Masar ayaa sidoo ...
Induniisiya oo Masaajidda faraysa inay xoojiyaan xamakeynta Covid-19.
Himilo April 10, 2021	Leave a comment 192 Views
MUQDISHO (HN) — Masaajidda ku yaalla caasimadda Jakarta, Indonesia, ayaa la faray inay sameeyaan guddi qaabilsan ilaalinta sharciyada loo dejiyay faafitaanka xanuunka Corona inta lagu jiro bisha Ramadaan. Go’aanka oo kasoo baxay Jakarta Provincial Government, ayaa imaanaya xilli loo fasaxay masaajidda in lagu cibaadeysan karo inta lagu jiro bisha barakaysan ee Ramadaan. Si kastaba, waxaa jira codsi adag oo ay la ...
Himilo April 8, 2021	Leave a comment 238 Views
Sheekada Lammaanaha kala-qeybsada Masruufka iyo Maamulka Qoyska.
Himilo April 8, 2021	Leave a comment 191 Views
MUQDISHO (HN) — Muuqaal laga sii daayay telefishan Japanees ah ayaa ka warramaya sheekada lammaane is qaba muddo laba sanno ah isla markaana kala qeybsada masruufka iyo marashada reerka. 39 jirta lagu magacaabo Aiko iyo seygeeda Kazuki oo 42 jir ah markii ugu horreysay ku kulmay goob lagu ciyaaro game-ka, waxay yeesheen haasaawe qurxoon iyaga oo si dhow isaga dareemay ...
Himilo April 7, 2021	Leave a comment 142 Views
MUQDISHO (HN) —Carwo-duurjoog oo ku taalla Xianing, dalka Shiinaha ayaa baraha bulshada ka dhalisay dood kaddib markii la ogaaday inay eyga Rottweiler u ekeysiisay xayawaanka Yeyda – Uuleyda si loogu soo dalxiis tago. Qof kamid ah daawadayaasha oo la yiraahdo Mr. Xu, ayaa la maqlayaa isaga oo ku dhawaaqaya: “Hellow Yey miyaa tahay xaiiqdii?” – si muuqatana marka muuqaal ahaan ...
Q1aad: Sahmiyihii ugu waynaa China waxa uu ahaa Muslim–waxaana uu ahaa Shengi Hii ( Zheng He)
Maxayna Dhexyaal: Hurgumo mise Hunguri?– Maxammuud C. Geeldoon
Sawirrada Noloshii hore ee Yaasir Carafaat oo la helay.